Download လုပ်ထားသော Patch, Crack, Keygen ဖိုင်ကိုဖြည်ထုတ်နည်း ( မဖြစ်မနေဖတ်ပေးစေလိုပါတယ်.) - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home Crack/Patch/Keygen အသုံးပြုနည်း Knowledge NEWS နည်းလမ်းများ ဒေါင်းလော့လုပ်နည်း Download လုပ်ထားသော Patch, Crack, Keygen ဖိုင်ကိုဖြည်ထုတ်နည်း ( မဖြစ်မနေဖတ်ပေးစေလိုပါတယ်.)
Download လုပ်ထားသော Patch, Crack, Keygen ဖိုင်ကိုဖြည်ထုတ်နည်း ( မဖြစ်မနေဖတ်ပေးစေလိုပါတယ်.)
Maung Pauk at 4:28:00 PM Crack/Patch/Keygen အသုံးပြုနည်း, Knowledge, NEWS, နည်းလမ်းများ, ဒေါင်းလော့လုပ်နည်း,
ကျွန်တော်တို့ ဖိုင်တွေတင်နေတဲ့ Hosting Site တွေဟာ Terms of Services (TOS) တွေ အကန့်အသတ်နဲ့ပေးထားကြပါတယ်.. Storage, Bandwidth, Keeping Period တွေ အဆင်ပြေပေမယ့် Crack, Patch, Keygen တွေကိုကျတော့ လက်မခံတတ်ကြပါဘူး.. လက်ခံတဲ့ Site တွေကျတော့လည်း Keeping Period ထားသိုတဲ့အချိန်ကာလ နည်းပါးပါတယ်.. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Keygen, Patch, Crack တွေကို Hosting Site တွေက မဖျက်ပစ်ရအောင် မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်နဲ့ကျွန်တော် တင်ပေးဖို့ စဉ်းစားပါတယ်... ဒါကြောင့် ဖြည်တဲ့နည်းကိုတော့ မဖြစ်မနေဖတ်ပေးစေလိုပါတယ်..
Crack, Patch, Keygen တွေကို rar ဖိုင်ဖြည်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ အထဲမှာ Folder တစ်ခုထွက်လာပါမယ်.. အဲဒီ Folder ထဲမှာ File Extension ( ဖိုင်အမျိုးအစား ) ဖျောက်ထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
အဲဒီ File Extension ( ဖိုင်အမျိုးအစား) မပါတဲ့ဖိုင်ကို Right Click>Rename (သို့မဟုတ်) F2 ကိုနှိပ်ပြီး နာမည်ရဲ့ အဆုံးမှာ .rar ဆိုပြီး Rename ပေးလိုက်ပါ..
Rar ဖိုင် တစ်ဖိုင် ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်...
အထဲမှာ တကယ်အလုပ်လုပ်မယ့်ဖိုင်ကိုတော့ File Extension ( ဖိုင်အမျိုးအစား) ၀ှက်မထားပါဘူး.. ဒါလေးကိုတော့ မိတ်ဆွေများ စိတ်နည်းနည်းရှည်ပြီး လုပ်ပေးကြစေလိုပါတယ်.. ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဖိုင်တွေကို ဖျက်ခံရရင် မိတ်ဆွေများလည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရသလို ကျွန်တော်လည်း စိတ်ပင်ပန်း၊ စိတ်မကောင်း၊ အလုပ်ပိုရှုပ်ဖြစ်ရပါတယ်... ဒါကြောင့် Crack , Patch, Keygen တွေကို ဒီနည်းအတိုင်း ဖြည်ယူကြဖို့ အသိပေးပန်ကြားအပ်ပါတယ်.. Setup ဖိုင်တွေကိုတော့ သာမန်အတိုင်းပဲထားမှာပါ...
Download လုပ်တဲ့အခါ ဒေါင်းလော့လုပ်နည်းတွေကို ဒီမှာ အပြည့်အစုံဖတ်ပေးစေလိုပါတယ်.. ဖိုင်လင့်တွေရှိနေလျက်နဲ့ ဒေါင်းမရဘူးဆိုလို့ပါ...
ပြီးတော့ တစ်ချို့ Site တွေမှာ Download with accelerator ဆိုပြီး ရှိပါတယ်.. ဆိုလိုတာက သူတို့ရဲ့ Downloader လေးကို အရင်ဒေါင်းပြီး Run ခိုင်းတဲ့သဘောပါ.. ဒါဆို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဖိုင်ကို တိုက်ရိုက်မရပါဘူး.. exe တစ်ဖိုင်ပဲရလာမှာပါ.. အဲဒီ exe ဖိုင်ကို Run ပြီးမှ ကိုယ့်ဖိုင်ကို ပြန်ဒေါင်းရတာပါ.. ဒါကြောင့် Download with accelerator ဆိုတဲ့ စာသားပါခဲ့ရင် အဲဒီရှေ့က အမှန်ခြစ်ကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါ.. ဥပမာအနေနဲ့ Tusfiles.net မှာ Download with TusFiles accelerator and get recommended offers. ဆိုပြီးတွေ့ရတတ်ပါတယ်...
ကျွန်တော် တွေ့ဖူးသလောက် Tusfiles, Ziddu, DataFileHost စတဲ့ဆိုဒ်တွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်..
Crack/Patch/Keygen အသုံးပြုနည်း, Knowledge, NEWS, နည်းလမ်းများ, ဒေါင်းလော့လုပ်နည်း
Crack/Patch/Keygen အသုံးပြုနည်း Knowledge NEWS နည်းလမ်းများ ဒေါင်းလော့လုပ်နည်း